ရန်တိုက်ပေးတဲ့ သတင်းအမှားတွေ ဆက်လက်မဖြန့်ဝေကြဖို့ တောင်းပန်လိုက်တဲ့ ယုန်လေး – Daily Feed MM
ရန်တိုက်ပေးတဲ့ သတင်းအမှားတွေ ဆက်လက်မဖြန့်ဝေကြဖို့ တောင်းပန်လိုက်တဲ့ ယုန်လေး
Admin_John | August 10, 2020 | Cele | No Comments
သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့ ညပိုင်း မှာ တော့ ယုန်လေး ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဆိုတော် လင်းလင်းကို ပြောဆို ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ Facebookမှာ ပျံ့နှလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်း ထွက်ပေါ်လာမှုနဲ့ သတ်သတ် ပြီး ယုန်လေးရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ မြင့်မြတ်
ဟာ…ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်စေမယ့် စကားမျိုး မပြောခဲ့ကြောင်း ယခုလိုပြောပြ လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း မြင့်မြတ်သည်…။ ကျွန်တော့် ကို အတူတူရှိပြီး မဖြစ် သင့်တာ..မဖြစ်အောင် အားပေးခဲ့တယ် . ထိန်းပေးခဲ့တယ် ….။ဘယ်သူ့ကို မှအမုန်း
တရားမရှိပါ …။ဘယ်သူ့ကို မှ လည်း ဘာမှ ပြောဆိုချင်းမရှိပါခင်များ…။ကျွန်တော်လည်း စိတ်သက်သာ သွားရင်Fb ပြန်သုံးပြီး . အရင် လို ပုံမှန် ပြန်လည်ပတ်ပါမည် ခင်များ… ဆိုပြီး ယုန်လေးရဲ့ ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထား တာတွေ့ရပါ တယ်။ပရိ သ
တ် ကြီးရေ မနေ့က အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့ ခဲ့တဲ့ သတင်းဟာ လုပ်ကြံ ကောလဟာလ သတင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုလိုအဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်နော်…နောက်များမှာလည်း အခုလိုဆယ်လီတို့ရဲ့ သတင်း
များနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအုံးနော်….။
ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔ ညပိုင္း မွာ ေတာ့ ယုန္ေလး ကိစၥ နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အဆိုေတာ္ လင္းလင္းကို ေျပာဆို ခဲ့တဲ့ သတင္းေတြ Facebookမွာ ပ်ံ႕ႏွလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္း ထြက္ေပၚလာမႈနဲ႔ သတ္သတ္ ၿပီး ယုန္ေလးရဲ႕ အခ်စ္ဆုံး သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ ျမင့္ျမတ္
ဟာ…ဘယ္သူ႔ကိုမွ ထိခိုက္ေစမယ့္ စကားမ်ိဳး မေျပာခဲ့ေၾကာင္း ယခုလိုေျပာျပ လာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း ျမင့္ျမတ္သည္…။ ကြၽန္ေတာ့္ ကို အတူတူရွိၿပီး မျဖစ္ သင့္တာ..မျဖစ္ေအာင္ အားေပးခဲ့တယ္ . ထိန္းေပးခဲ့တယ္ ….။ဘယ္သူ႔ကို မွအမုန္း
တရားမရွိပါ …။ဘယ္သူ႔ကို မွ လည္း ဘာမွ ေျပာဆိုခ်င္းမရွိပါခင္မ်ား…။ကြၽန္ေတာ္လည္း စိတ္သက္သာ သြားရင္Fb ျပန္သုံးၿပီး . အရင္ လို ပုံမွန္ ျပန္လည္ပတ္ပါမည္ ခင္မ်ား… ဆိုၿပီး ယုန္ေလးရဲ႕ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားထား တာေတြ႕ရပါ တယ္။ပရိ သ
တ္ ႀကီးေရ မေန႔က အြန္လိုင္းမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ခဲ့တဲ့ သတင္းဟာ လုပ္ႀကံ ေကာလဟာလ သတင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ အခုလိုအဆုံးထိ ဖတ္ရႈေပးတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Page မွ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ ရွိပါတယ္ေနာ္…ေနာက္မ်ားမွာလည္း အခုလိုဆယ္လီတို႔ရဲ႕ သတင္း
မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Page ေလးကို Like & See First ေလးလုပ္ေပးသြားၾကပါအုံးေနာ္….။
အမေက အိမ်အသစ်ကြီးကို အရမ်းသဘောကျနေတယ်လို့ ပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ဖြူဖြူထွေးလေးကို ချစ်ပြီးသားပါဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် (ရုပ်သံ)
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဦးနှောက်မရှိကြဘူးလို့ ဆိုတဲ့ မင်းခန့်ကျော်
အဆိုတော် မျိုးကြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ကောင်းမွန်လာပြီး မကြာခင် ဆေးရုံဆင်းရတော့မည်